Azo ovana ve ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny vavaka? | TOKO VAVAKA
Home vavaka Azo ovana ve ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny vavaka?
Androany isika dia hampianatra ny tenantsika amin'ny lohahevitra misy marika Azo ovana ve ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny vavaka? Na ndao apetraka amin'ny endrika tsotra, Andriamanitra ve dia manova ny sainy rehefa isika Mivavaha? Ohatra, raha aseho fahitana zavatra hitranga amintsika isika, azontsika atao ve ny manova ny fisainan'Andriamanitra ka tsy mamela ny zavatra hitranga amintsika toy izany?
Andao haka sary iray avy amin'ny tantaran'ny Isrealites. Fony teo an-tendrombohitra Sinay i Mosesy mba haka ny didin'ny Tompo ho an'ny vahoaka Isreal. Nijanona elaela tamin'ny fihaviany i Moizy ary ny zanak'Isrealita dia nandrendrika ny rojo vy sy ny kavina ary nanangana sary volamena avy teo ka nitsaoka ny sary andro aman'alina. Ny fahatezeran 'ny Tompo dia mafy tamin' ny zanak 'Isreal.
Ny bokin'i Eksodosy 32: 10-14 Koa ankehitriny avelao aho hirehitra aminy ny fahatezerako handringanako azy; ary hataoko firenena lehibe ianao. Hita miharihary fa ny fahatezeran'ny Tompo dia nitombo tamin'ny zanaky Isreal. Tian'Andriamanitra ny hanasazy azy ireo mafy noho izay nataony. Na izany aza, nifona ho azy ireo i Mosesy tao amin'ny andininy manaraka tao amin'io toko io. Ao amin'ny andininy 11 Ary Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe: Tompoko, nahoana ny fahatezeranao mirehitra amin'ny olonao, izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny hery lehibe sy ny tànana mahery?
Nahoana ny Egyptiana no hiteny hoe: Ny loza no nitondrany azy nivoaka hamono azy eny an-tendrombohitra sy handringanany azy tsy ho ambonin'ny tany? Mialà amin'ny fahatezeranao mirehitra, ka mibebaha amin'izao ratsy ataonao amin'ny olonao izao.
Tsarovy i Abrahama sy i Isaka ary i Israely mpanomponao, izay nianiananao taminao, ka hoy ianao taminy: Hataoko maro ny taranakao tahaka ny kintana amin'ny lanitra, ary ity tany rehetra nolazaiko ity dia homeko ny dia handova azy izy mandrakizay.
Ary Jehovah nanenina ny amin'ny loza nokasaina hamelezana ny olony.
Nanambara ny soratra masina fa nibebaka tamin'ny fahatezerany Andriamanitra ary namela ny zanakalahin'i Isreal ho velona indray. Ary koa, rehefa nanome toromarika an'i Isaia Mpaminany Andriamanitra mba hampahafantatra an'i Hezekia mpanjaka fa ho faty izy. Ao amin'ny bokin'i 2 Kings 20. Nasain'Andriamanitra niresaka tamin'i Hezekia Mpanjaka i Hezekia mba handamina ny tranony satria ho faty izy. Tonga dia nivavaka tamin'Andriamanitra i Hezekia mpanjaka. Nilaza tamin'Andriamanitra izy mba hahatsiaro ny fanompoana rehetra nataony teo alohany ary nilaza tamin'i Isaia Andriamanitra mba hampahafantatra amin'ny mpanjaka fa voavaly ny vavaka nataony ary dimy ambin'ny folo taona no nampiana ny taonany teto an-tany.
Raha te hitsara amin'ireo tantara roa ao amin'ny Baiboly ireo isika dia mety hihevitra fa ny sitrapon'Andriamanitra na ny fikasany dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny vavaka mandrakariva. Na izany aza, hoy koa i Mosesy ao amin'ny bokin'i Nomery 23:19 Andriamanitra tsy olombelona ka handainga; na ny zanak'olombelona hibebaka; efa nilaza va Izy fa tsy hanatanteraka? na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny? Eto no atsipy ny fikorontanan'ny rivotra. Andriamanitra tsy mba olona handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Midika izany fa tsy manova ny teniny Andriamanitra ary mijanona ho fahafoizan-tena ny Sitrapony sy ny fikasany.
Ny fahamarinana tsotra roa momba ny Sitrapon'Andriamanitra
Tsy miova ny fikasan'Andriamanitra
Andao mbola haka sary avy amin'ny tantaran'i Mosesy sy ireo Isrealita. Andriamanitra dia nanao toky tamin'i Abrahama, Isaka ary i Jakôba mba hanome tany ny taranany tany tondra-dronono sy tantely. Rehefa nesorina hiala ny Egyptiana ny zanak 'Isreal ary Moizy niakatra tany an-tendrombohitra Sinay mba haka ny didin' ny Tompo. Nanamboatra sarin'omby ho an'ny tenany ny olona ary nanompo azy toy ny andriamanitra namoaka azy ireo tamin'ny fahababoana.
Tezitra Andriamanitra fa nifona i Mosesy. I Mosesy dia nanelanelana tamin'ny toeran'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny zanaky Isreal. Tsarovy i Abrahama sy i Isaka ary i Israely mpanomponao, izay nianiananao taminao, ka hoy ianao taminy: Hataoko maro ny taranakao tahaka ny kintana amin'ny lanitra, ary ity tany rehetra nolazaiko ity dia homeko ny dia handova azy izy mandrakizay. Manaja ny teniny Andriamanitra ary manaja ny fanekeny. Na inona na inona toe-javatra misy dia hijoro ny faneken'ny Tompo.
Tadidio fa na eo aza ny habibiana ataon'ny mponin'i Isreal dia tsy niova ny Sitrapon'Andriamanitra sy ny fanekeny ho azy ireo. Raha olombelona Andriamanitra dia ho nariany ny zanak'Isreal tsy hiditra ny tany Kanana satria mafy hatoka izy ireo ary maditra tokoa. Na izany aza, ny lesoka tamin'izy ireo dia tsy nanakana an Andriamanitra tsy hanatanteraka ny fampanantenany ho azy ireo. Faharesena ihany no niainan'izy ireo.
Ny vavakay dia mahatezitra zava-mahatalanjona
Hoy ny soratra masina ao amin'ny bokin'i Jakôba: Ny vavaka mafonja ataon'ny olo-marina dia mitaky be. Fitaovana ifandraisana ny vavaka. Indraindray ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra dia mety hahatonga Andriamanitra hanova ny Sitrapony amin'ny fiainantsika. Ohatra tsara ho an'izany i Hezekia Mpanjaka. Rehefa nilaza tamin'i Isaia Andriamanitra mba hilaza amin'ny mpanjaka ny fahafatesany. Dia niankohoka ny mpanjaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra fatratra. Milaza amin'Andriamanitra mba hahatsiaro ny fanompoana rehetra nataony teo alohany.
Voarakitra ao amin'ny soratra masina fa nihaino ny feon'i Hezekia mpanjaka Andriamanitra ary nilaza tamin'i Isaia hampahafantatra azy fa nanampy dimy ambin'ny folo taona koa izy. Izany dia mba hahatanteraka ny tenin'ny tompo ao amin'ny bokin'i Jeremiah Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anao, hoy NY TOMPO, dia hevitra fiadanana fa tsy loza, mba hanome anao ho avy sy fanantenana. Ny vavak'i Hezekia mpanjaka dia mbola tao anatin'ny fangejana ny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny olona. Manetsika ny tanan'Andriamanitra ny vavaka. Rehefa misy lehilahy mivavaka dia misy Andriamanitra izay mamaly vavaka no asany.
Nivavaka tamin'Andriamanitra ho an'ny Sodoma sy Gomora i Abrahama ary notsimbinin'Andriamanitra i Lota sy ny ankohonany. Tsy azontsika atao ny manilika ny herin'ny fanelanelanana. Rehefa mivavaka isika dia miova ny toe-javatra.
Previous lahatsoratraFomba 5 mety hitenenan'Andriamanitra aminao
Next lahatsoratraAndinin-teny hivavahana rehefa iharan'ny fanafihana ianao
30 Vavaka mba hahombiazana amin'ny raharaham-barotra amin'ny 2020
Hevitra mahery vaika mba hanasitranana homamiadana
Vavaka ho an'ny firenena tanzania